काम गर्न केको लाज !अरुको घरमै लुगा धोएरनै महिनामा ५ लाख सम्म कमाउँने २८ बर्षिय युवाको रोचक कहानी(हेर्नुहोस भिडियो कुराकानी) – Complete Nepali News Portal
पछिल्लो समय देशमै केही गरौं, परिवर्तन संभव छ भनेर अघि बढ्ने युवाहरुको जमात निकै देखिन थालेको छ । यसको गतिलो उदारण हो स्मार्ट धोबी अर्थात् काभ्रे कोशीपारी, चौरी देउराली गाँउपालिकाका सुजन चौलागाई ।
कामलाई सानो मान्नु हुदैंन भन्ने सोच बोकेका सुजनको यो काम गर्ने तरिका भने अरुको भन्दा फरक छ । शहरबजारमा लुगा धूने विभिन्न ठाँउहरु नभएको होइन तर उनी आफिस नै खोलेर, राम्रै लगानी गरेर अनलाइनबाट मार्केटिङ गर्दै सेवाग्राहीलाई उत्कृष्ट सेवा दिन माहिर छन् । उनी कहाँ आउँने ग्राहकले नै अरुलाई पनि बताउने र नयाँ ग्राहकहरु आउने उनको भनाई छ ।
आखिर सुजन किन यही व्यवसायतर्फ तानिए त ? कस्तो छ उनको दैनिक करोबार ? हेर्नुहोस भिडियो अन्र्तवार्ता….